Toronto Jazz Festival: The Complete Guide
Ny TD Toronto Jazz Festival dia nirotsaka tamin'ny taona 1987 niaraka tamin'ireo sehatra ofisialy telo ary efa fantatra ho iray amin'ny fetibe jazz voalohany any Amerika Avaratra. Ny hetsika isan-taona isan-taona dia manintona ny sasany amin'ireo anarana lehibe indrindra amin'ny mozika ary manolotra fandaharam-pampianarana maro samihafa, ny ankamaroany dia afaka. Na manantena ny handefa tapakila ianao, na hijery izay fety momba ny fetibe, na ianao dia faly amin'ny fanatrehana, vakio amin'ny zava-drehetra tokony ho fantatrao momba ny Festival Festival Jazz.
Nandritra ny 30 taona lasa izay, ny Fetibe Jazz Festival tao Toronto no mandeha matanjaka ao an-tanàna ary mitranga ao anatin'ny folo andro farany ny volana Jona sy ny volana Jolay. (Ny fetiben'ny 2018 dia hatao ny 22 jona ka hatramin'ny 1 Jolay.) Nandritra ny hazakazaka, dia nampiseho mihoatra ny 3.200 ny hetsika ho an'ny daholobe, nampiantrano mpanakanto maherin'ny 30.000, ary nahasarika olona 11 tapitrisa ho tonga sy hankafy ny mozika. Ny niantombohan'ny fankalazana kely ny mozika jazz dia manintona mpankafy miisa 500.000 isan-taona, izay maniry ny hijery mpiangaly mozika miisa maherin'ny 1 500 hivoaka ny sehatra any amin'ny toerana lehibe sy kely manerana ny tanàna.
Toerana sy toerana
Ny iray amin'ireo zavatra tsara indrindra momba ny Fetibe Jazz Festival (ankoatra ny lisitr'ireo mpanakanto mahatalanjona izay nahazo ny dingana samihafa isan-taona) dia ny fisian'ny karazan'asa maro hofidiana. Taona maro lasa izay, ny ankamaroan'ny hetsika dia natao tao amin'ny Nathan Phillips Square teo anoloan'ny Lapan'ny tanàna, saingy hatramin'ny 2017, ny tanànan'i Yorkville tao Toronto dia toerana lehibe ho an'ny ampahany betsaka amin'ny fampisehoana.
Raha ny marina dia nisy ny fampisehoana maherin'ny 100 maontina natao tao amin'ny dingam-pivoarana manerana an'i Yorkville, izay hiverina indray ny andian-dahatsary fampisehoana maimaim-poana. Yorkville, eo akaikin'ny làlana midadasika ny làlan'i Yonge sy Blood, no mahatonga ny mpitsidika toerana sy mora azo ahiana.
Ireo mpikarakara ny fetibe koa dia te-hanome voninahitra ny tantaran'ny mozika Yorkville.
Ny faritra dia nampiarahina mozika mavitrika nandritra ny taona 1960 sy 1970 ary ny fivoriambe Jazz dia nitondra mozika niverina tany amin'ny tanàna iray izay efa fantatra tamin'ny artista mpihira (ny iray amin'izany i Joni Mitchel sy i Neil Young) izay nilalao tao amin'ny bara sy kafe trano.
Ho an'ny Festival Jazz 2018, ireto toerana manaraka ireto ao Yorkville dia ho ampiasaina amin'ny programa maimaim-poana:
Fivorian'ny OLG ao amin'ny Cumberland St.
OLG Dingana ao amin'ny Hazelton Ave
OLG Stage ao amin'ny Yorkville Ave
Pilot Tavern - Fialofana Lounge
Bar ho an'ny Vodka Bar, Intercontinental Toronto Yorkville Hotel
Ny Efitrano Concert
Village Village - The Oval
Village Village - The Laneway
Ireo hetsim-panoherana voamarina dia hitranga any amin'ireo toerana manaraka eto amin'ny tanàna:
Hall Hall Danforth
Home Smith Bar ao amin'ny Old Mill Toronto
Koerner Hall ao amin'ny Telus Center for Performance & Learning
Concert Theater Phoenix
Ny Rex Jazz & Blues Bar
Avy amin'ny mpihira mazàna sy ny legioma jazz, ho an'ny asa an-tselika, dia hahazo karazana artista maro manerana ny dingana. Taloha, nisy mpihira fanta-daza toy ny Miles Davis, Dizzy Gillespie, Ray Charles, Tony Bennett, Rosemary Clooney, Harry Connick Jr., Etta James ary Diana Krall (ankoatra ny maro hafa).
Miova amin'ny fety isan-karazany ny asa, fa ho an'ny Festival Festival Jazz 2018, anarana sasany izay efa nambara dia ny Herbie Hancock, Alison Kraus, Seal, Bela Fleck & The Flecktones, Savion Glover ary Holly Cole. Jereo ny tranonkalan'ny fetibe mba hijanonana amin'ny fomba azonao andrandraina.
Misy fomba maro ahafahanao mividy tapakila hanaovana fampisehoana amin'ny fetibe - ireo izay tsy afaka, izany.
Ho an'ny fampisehoana fa ao amin'ny Caravan Palace, Jazz Bistro, ary Home Smith Bar dia afaka mahazo tapakila amin'ny Ticketpro ianao na online na amin'ny finday (1-888-655-9090). Ho an'ny fampisehoana any Koerner Hall, mividiana tapakila amin'ny Internet na amin'ny finday (416-408-0208). Ho an'ny fampisehoana any amin'ny Sony Center dia azonao atao ny mividy tapakila amin'ny Internet na amin'ny finday (1-855-872-7660).
Fihaonana mifandraika amin'izany
Ankoatra ny Festival Jazz Toronto, misy fomba iray hafa ahafahana mankafy jazz ao an-tanàna, ary izany no Festival International Jazz Festival, izay nanomboka tamin'ny 1989 ary efa nitombo hatramin'izao.
Ho an'ny 2018, ny fetibe dia hatao ny 6 ka hatramin'ny 29 Jolay, ary ny fidirana ao amin'ny Beaches International Jazz Festival dia afaka.
Kanada amin'ny fahalavoana
Mahazo ny tatitra maimaim-poana anao any Ontario
Ny sakafo 10 tsara indrindra ho an'ny Andron'ny Reny any Toronto
Top 10 Attractions in Street Street Yonge
Ahoana ny fijanonana ny fiantsoana avy any Telemarketers any Kanada
Memphis 'trano avo indrindra
Ny fiafaran'ny Libertyland
Top 10 Novambra hetsika tany Toronto
6 Toeram-pivarotana lehibe indrindra any Brooklyn
Arizona's 4 Best Food Travel Experiences
Ramadan traikefa any Delhi: Fivarotana sakafo an-dalambe manokana
Febroary 2018 Fety sy zava-nitranga tao amin'ny faritra Washington DC
Ny fivarotam-boky tsara indrindra any Seattle sy Tacoma
Ny tari-dàlana manan-danja amin'ny Ski Mountain Mountain
Safidy Andraikitra ho an'ny mpitsidika mpianatra
12 Orlando Hotels manana rivo-doza mahatsiravina
5 Zava-miafina azonao atao any Karibeana Tsy misy olana rehefa mivezivezy ianao
Aruba Queen Beatrix International Airport (AUA) Guide